I-Cathedral Suite (Isitezi Kuwena) - I-Airbnb
I-Cathedral Suite (Isitezi Kuwena)
I-ikamelo lezivakashi ephelele ibungazwe ngu-Ian And Sonja
U-Ian And Sonja Ungumbungazi ovelele
Eyakho i-basecamp ye-Teton! Indawo yokuhlala yangasese esanda kulungiswa. Usilingi omkhulu we-cathedral! Iphansi elishisayo elikhazimulayo. Igumbi lokulala elihle elibekwe kahle, igumbi lokulala elengeziwe / igumbi lokuhlala kanye nokugeza okugcwele okubanzi (okugcwele ngokuphelele). Ukukhanya okuningi okunokubukwa kwezintaba. I-Western motif & art kulo lonke. I-Luxury Stearns entsha ethokomele kakhulu kanye nomatilasi we-Foster king size. Itafula lesevisi yokudlela elinesevisi yekhofi ye-Keurig (inkomishi enikeziwe), ifriji elincane namasethi epuleti/isiliva. Isihlalo se-lounge in master ukuze kufundwe
I-Cathedral Suite iyisikhala esinikezelwe kuwe. Amakamelo okulala amabili nebhavu elilodwa elisezingeni eliphezulu lekhaya lethu. Ngeke uthole izinto zomuntu siqu endaweni osiqashayo. Ukushisa kwaphansi okukhazimulayo kudala umuzwa othokomele nokwamukela. Itholakala phansi kweTeton Pass eTeton Valley. Uzokwazi ukufinyelela kalula e-Jackson Hole, i-Jackson Hole Mountain Resort, i-Grand Targhee Resort kanye nemizila eminingi, imifudlana neziqongo ezitholakala khona kanye ngaphandle komnyango wakho!
UKUPHEPHA KWE-COVID: Senza konke esingakwenza ukuze sigcine wonke umuntu ephephile phakathi Nobhubhane lwe-COVID ngokuqinisekisa ukuthi ungena kalula ukuze uthole ukuthintana okulinganiselwe. Ukuhlanza nokubulala amagciwane ngokuhlakanipha, sehlise kwaba izinhlu ezimbili esikhundleni sezine futhi ungaqiniseka ukuthi uzoba ukuphela kwezihambeli ebhilidini lolu hlu olukuso. Kuma mahhala futhi awunayo nje indawo yakho yokungena kodwa ngeke kube khona ezinye izimenywa kulesi sakhiwo. Futhi siyaqinisekisa ukuthi silandela umthetho olandelwayo ngokuhlanza nokuthuthwa kwendle. Usizo lwethu lokuhlanza lukhulu kulokhu ngoba ungumama wengane eneminyaka emihlanu ubudala esengozini enkulu ngenxa yokufakelwa izitho eziningi nezinye izinkinga. Ngakho-ke futhi izinto zihlanjululwe ngokufanelekile hhayi kuwe kuphela, kodwa nakithi kanye nosizo lwethu nomndeni wakhe.
4.88 · 111 okushiwo abanye
Indawo enhle ephephile futhi ethule, egxile emndenini! Sicela ushayele ngokuphepha nangokunensa futhi uhloniphe ubumfihlo bomakhelwane bethu ngokukhawulela umsindo wangaphandle. Ukuthuthukiswa kuhambisana nokuhamba izintaba (yebo amabhulokhi amabili kuphela ukusuka) kanye nebhayisikili yebhayisikili yengoma eyodwa. Ukuvakasha kwe-backcountry, kungakhathaliseki ukuthi ku-skis noma i-splitboard kuyinto yesibili kune-Teton Pass eqhele ngamamayela angu-5. Ukubuka okuhle kwentaba nesigodi. Uhambo lwemizuzu emithathu ukuya eGrand Teton Brewery ukuze uthole amaphisi okugubha uhambo lwangemuva. I-Full Circle Organic Farm eduzane nomakhelwane. Lahla amavayibhu ezivakashi lapha e-Teton Valley noma uye e-Jackson Hole eseduze nendawo enkulu ye-Teton/Yellowstone ukuze uthole ukulungiswa.
Ibungazwe ngu-Ian And Sonja
Sivamise ukuphuma endlini siyohlola noma sisebenze emini/ebusuku. Uma siphelelwe isevisi ezweni elingemuva umsizi wethu ophethe, uSonja, uyatholakala ukuze atholwe imibuzo ngokuthumela umlayezo we-Airbnb. Kafushane nje, isisebenzi sethu u-Peggy uhlala eduze futhi angakwazi ukusiza nezivakashi.
Futhi yebo singakusiza ukukuqondisa ngemisebenzi yakho kanye nezinketho zokudlela lapha endaweni enkulu ye-Yellowstone nase-Teton!
Sivamise ukuphuma endlini siyohlola noma sisebenze emini/ebusuku. Uma siphelelwe isevisi ezweni elingemuva umsizi wethu ophethe, uSonja, uyatholakala ukuze atholwe imibuzo ngokuthu…
UIan And Sonja Ungumbungazi ovelele